Howlgal Xoogan Oo Weli Ka Socda Magaalada Gaalkacyo – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Howlgal Xoogan Oo Weli Ka Socda Magaalada Gaalkacyo
Howlgal Xoogan Oo Weli Ka Socda Magaalada Gaalkacyo
Waxaa weli Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug ka socda howlgalo xoogan ay sameeynayan Ciidamada Daraawiishta maamulka Puntland oo dhawaan halkaasi la geeyay.
Ciidamada ayaa howlgalkaasi intiisa badan ka sameeyay xaafaddo bartilmaameed u ahaa oo ku yaalla Waqooyiga Gaalkacyo,isla markaana ku soo qab qabtay dhalinyaro farabadan.
Dadkii lagu soo qabtay howlgalka loogu magacdaray Caasho Maxay Galabsatay oo ay Ciidamada Daraawiishta Puntland ka wadaan Magaaladaasi ayaa waxaa dadka deegaanka ay sheegeen in la geeyay Xabsiga dhexe ee Gaalkacyo,iyadoona ay baaritaano ku wadaan Ciidamada.
Magaalada Gaalkacyo gaar ahaan Waqooyiga ayaa waxaa muddo ku dhow 7-Cisho ka socda howlgalo xoogan,kaasi oo yimid kadib markii halkaasi ay muddooyinkii dambe ku soo bateen falal amnidaro iyo kooxo burcad ah oo xiliyada habeenkii dhaca u geysanaya dad deegaanka.
Warar hoose oo aan heleyno ayaa sheegaya in howlgalka uu marar qaar hakad geliyo Ganacsiga iyo isku socodka gaadiidka dadweynaha ay saaran yihiin.
Previous articleGabar Soomaali ah oo afduubatay diyaarad oo dalbatay in dib loogu soo celiyo Somalia
Next article4 Waddo oo Ragga Xishoodka Badan Ay Ku Sheegan Karaan Jacaylkooda